Iibinta Macs ee Q1 2021 waa labanlaabmay marka loo eego 2020 | Waxaan ka socdaa mac
Iibinta Macs ee Q1 2021 ayaa labanlaabmay marka loo eego 2020
Looma baahna in la noqdo Ming-Chi Kuo si loo hubiyo in iibka Mac uu hadda kobcayo. Iyo in kabadan waxay noqon doonaan marka iMac-ka cusub ee wata processor-ka M1 uu ku qarxo suuqa. Shaki la'aan, Apple wuxuu qodbay xilligii cusbaa ee Apple Silicon, oo ah qadar khatar ah oo leh guulo cajiib ah.
Xogta iibka ee Macs rubuca hore ee sanadkan ayaa horeyba u soo muuqday, iyo laab cutubyo la iibiyay isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. Dabaylo wanaagsan ayaa u socda Macs, waxay ahayd waqtigii.
Marka loo eego xogta iibka ee ay daabacday IDC, Macs waxay arkeen koboc xoog leh rubacii koowaad ee sanadkan, iyadoo iibku sii kordhayo 111,5% marka loo barbardhigo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay.
Natiijooyin wanaagsan ayaa ku mahadsan Apple Silicon
Shaki la'aan, Apple waa soo saaraha ugu koray iibka kumbuyuutarka.
Xogta ayaa muujineysa in guud ahaan warshadaha kombiyuutarka ay ka koreen sidii sanadkii hore, in kasta oo ay jiraan aafada iyo qeybaha. Rubucii ugu horreeyay ee sanadka, Apple wuxuu iibiyay qiyaastii 6,7 malaayiin ee Macs, oo matalaya 8% suuqa oo dhan. Sannad ka hor uun, isla muddadaa, tirooyinkoodu waxay ahaayeen 3,2 milyan kombuyuutar.
Soosaarayaasha kale sida Lenovo, HP iyo Dell waxay arkeen kobaca laba-geesoodka rubuckan. Si kastaba ha noqotee, Apple waxay leedahay koritaan aad u sarreeya. Ryan reith, Madaxweyne Ku-Xigeenka Tracker Qalabka Caalamiga ah ee IDC, ayaa sheegaya in warshadaha ay saameyn ku yeelatay qaybo ka sii yaraanaya, laakiin aragtida ayaa weli ah mid wanaagsan.
Waxqabadka Apple ee rubuckan wuxuu daba socdaa koboc weyn oo bilaabmay rubucii afraad ee sanadkii hore. Apple waxay aragtay 31,3% koror ah iibka marka loo barbardhigo isla rubucii sanadkii hore. Shaki la'aan, khaladka waxaas oo dhan ayaa ah aqbalaadda weyn ee moodooyinka cusub ee Silicon Apple adeegsadayaasha.
Bishii Nofeembar, Apple waxay soo saartay saddex Mac oo cusub oo wata processor-kooda M1. Isagoo fiirinaya bilaha soo socda, Apple ayaa la filayaa inuu ballaariyo hoggaankiisa dhinaca PC-ga iyadoo ay ugu wacan tahay soo bandhigista cusub MacBook Pro e iMacs dhammaantood horayba waxay ula socdeen processor-ka cusub ee ARM.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Iibinta Macs ee Q1 2021 ayaa labanlaabmay marka loo eego 2020